Zvinhu zvishanu Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Baba-Mwanasikana Dhanzi | Fred Astaire
Fred Astaire Dhani Studios - MUDZIDZO MUTSVA WAKAKOSHA
Mutsva Mudzidzi Akakosha
4 mbiru dzekutamba
Tamba Chidzidzo FAQs
Vana '& Vechidiki' Zvidzidzo
Para Kutamba Zvidzidzo
Int'l Dare Kanzuru
Nhau & Press
Mamirioni Mask Movement ™
Mitambo Yenyika Dzepasi Pose
Blog & Yemagariro
Online Zvidzidzo Platform
Zvidzidzo zvepaInternet Info
Zvakanakira Kutenderera Zvidzidzo
Pamhepo Trophy System
Zvinhu zvishanu Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Baba-Mwanasikana Dhanzi
Iyo baba-mwanasikana kutamba ndiyo yakakosha pamichato mizhinji. Inguva iyo mwenga paanokudza baba vavo, uye achimiririra rudo nekutenda kwavanako kuna baba kana baba baba muhupenyu hwavo. Kana iwe ukafunga kuisa baba-mwanasikana kutamba mumuchato wako wega, unogona kusaziva kwekutangira. Verenga pamusoro pezvinhu zvishanu zvaunofanirwa kuziva nezve kutamba.
Nhoroondo pfupi yeiyo baba-mwanasikana kutamba
Kufanana netsika zhinji dzemuchato, baba-mwanasikana kutamba kunouya kubva munhoroondo yedu yemadzitateguru uye yaishandiswa sechirevo chekupedzisira nababa vemwenga murume asati ave murume akakosha muhupenyu hwemwenga. Ikozvino kutamba hakuna zvakunoreva zvakafanana, uye pachinzvimbo chiri zvimwe chechiratidzo cherudo rwababa nemwanasikana kune mumwe nemumwe.
Une baba nemwanasikana kutamba rini?
Varoora vazhinji vanosarudza kuita baba-mwanasikana vatambe chaiko mushure mekutamba kwavo kwekutanga nemurume / mukadzi wavo mutsva. Asi kana iwe usiri kuda kuve nekutamba mushure menguva iyoyo, kune dzimwe nguva dzakanaka dzekuchimanikidza kuita senge mushure mekumesa tositi uye usati wacheka keke.
Ndeipi rwiyo yaunofanira kutora?
Nepo vamwe vachati vachisarudza rwiyo rwunobva pamoyo, rwerudo, vamwe vachati vanosarudza rwiyo rwunowedzera uye runounza kuseka kudiki kune vaenzi. Pakupedzisira zviri kwauri. Saka kunyangwe iwe ukasarudza chimwe chinhu nekukurumidza kana chinononoka, chinofanira kuratidza hukama hwako.
Iko kutamba kunofanirwa kuve choreographed here?
Kana iwe uchida kutamba kune inokurumidza, yekumhanyisa rwiyo, choreographing chiitiko chingangove chinonakidza uye chisina kutarisirwa pfungwa. Asi kana iwe uchida kugara nekunonoka, dhanzi yechinyakare, zvinogona kunge zvisiri kudiwa. Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kutora akati wandei ezvidzidzo zvekutamba pane kudzidzira pamberi peicho chaicho chinhu.
Iwe unogona here kusanganisira vako vekurera-vabereki?
Tsika chinhu chimwe, asi kutamba uku pakupedzisira kuri kwauri! Une rusununguko rwekusarudza chero waunoda kutamba naye, uye iwe unogona kugara uchichinjisa vadikani (kana nziyo) pakati nepakati. Kana paine vanhu vakati wandei vaungade kukudza nekutamba, ivo vese vanogona kuchinjana kucheka mukati kuti vagovane iyo nguva.
Kutamba kunotora nguva yakareba sei?
Mutemo wakanaka wechigunwe ndeyekuti kutamba kunoenderera kwemaminetsi matatu kusvika matatu, kana sekureba sekunge rwiyo rwacho ruchiripo. Nekudaro kune vamwe vanhu vanokurudzira kutamba yakapfupiswa vhezheni yenziyo pane iyo izere kuti vaenzi vako vatariswe.
KuFred Astaire Dance Studios, isu tinokwanisa kukupa iwe nevamwe vanhu vari muchato chako chemuchato matambiro ekutamba kuti zuva rako guru rinyanye kuve rakakosha. Kunyangwe iwe uchifarira choreographed maitiro kana uchingoda zvishoma kurovedza pamberi penguva yekuratidzira, isu tiri pano kuzobatsira. Taura nesu nhasi uye uwane zvimwe!
Wana Intro Offer
Copyright © 2021 Fred Astaire Dance Studios Mitemo Yebasa
Tibatsire kuwana ma studio padyo newe! Nzvimbo dzedu dzepedyo dzicharatidza pane peji rekutsvaga.
* inoratidza munda unodiwa